Ndingayiqala ngaphi iPinterest? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 11, 2021 0 IiCententarios 262
Kuqhelekile ukuziva usoyika xa uqala iprojekthi entsha ejolise ekufezekiseni amaphupha abantu. Oku ngokungathandabuzekiyo yenye yezinto ezinokufikelela esiphelweni ngenjongo ngaphambi kokuba uyiqaleKodwa ngeengcebiso ezichanekileyo kunye nomfutho ofanelekileyo, kunokwenzeka ngokupheleleyo ukufikelela kwiziphumo ezilungileyo.
Okwangoku, abantu abathi bakwiPinterest Bakhangela abasebenzisi abangabokuqala kwaye abangoyikiyo ukuzibonakalisa benjalo. Kule nqanaba, kubaluleke kakhulu ukuba ubonise iinjongo zakho kunye nento ofuna ukuyifumana ngexesha elifutshane kunokwenzeka kodwa ngeziphumo ezihlala ixesha elide.
Ke ngoko, sele kunye vele ungene kwiPinterest unephothifoliyo yamathuba alungele wena kwaye ngaphezu kwako konke, ngezinto ezininzi ezilungileyo eziphakathi kwephepha. Nangona kunjalo, ungonwabela namava anikezwe liqonga ngokwalo.
Yintoni iPinterest malunga nayo kwaye isebenza njani?
Kwimeko ebonakalayo ngakumbi kodwa ngaphezulu kwako konke, ukuphupha, iPinterest liqonga lonxibelelwano elamkela bonke abantu ukuba bajonge amaphupha abo kwikamva. Kuyatshiwo ukuba yinkangeleko yendalo kuba ngaphakathi kwiphepha ungabona amathuba ahlukeneyo kwikamva.
Enye yezinto ezitsala umdla wale ntanethi kukuba yahluke kakhulu kwabanye kuba awuyifuni Ukusebenzisana ngokuthe ngqo phakathi kwabasebenzisi, kodwa inkxaso yoshicilelo ukuyenza isebenze. Inika ukunceda abo bangenaso isikhokelo sendlela emayithathwe.
Yiba ngumendo phakathi kwamaphupha kunye nenyani
Zisa iindawo ezintle zomhlaba phakathi kwezimvo
Nxibelelana nabasebenzisi ngezikhonkwane
Fumana izindululo zoqoqosho ukuqala ubomi bobungcali
Nangona nabani na efuna ukusebenzisa iinethiwekhi ngendlela eyahlukileyo, eli qonga lenzelwe ezi ntlobo zemisebenzi ephambili.
Ngoku wonke umntu Siyazi kakuhle into eyenzekayo kwiPinterest, licebo elihle ukuba uqale kakuhle eqongeni. Akukho mfihlo ikhethekileyo yokuyifezekisa, kodwa into ebalulekileyo kukuba uhlale unyamezelo lokuba yonke into izakuhamba kakuhle.
Khetha izihloko kwifidi
Yintoni eya kukunceda wazi ngcono malunga nokuqhubekayo ngakuwe kukunika ukhetho olugqwesileyo kwizihloko eziphambili ezithi iya kuvela kwiphepha lasekhaya. Ngokuqinisekileyo oku kuyakuvumela ukuba unike imbonakalo yobuhlobo ukuze uzive uchongiwe.
Gcwalisa iprofayili kwaye uyilungiselele kwi-SEO
Ukuhambisa iinjini zokukhangela ngamagama aphambili kubalulekile, oku kuya kukubeka phakathi kwezikhundla zokuqala xa kuziwa ekufumaneni iziphumo. Ngaphandle kwamathandabuzo, ayisosifundo esilula kodwa esingangxami.
Ukucingelwa komgangatho kunye nokusebenza
Izithuba ekwabelwana ngazo azinakuthathwa kancinci, umgangatho kufuneka ubekhona ngalo lonke ixesha. Ukwengeza, iakhawunti kufuneka isebenze ukubona utshintsho oluphambili ngaphakathi kwenani labasebenzisi.
1 Yintoni iPinterest malunga nayo kwaye isebenza njani?
1.1 Iimpawu zePinterest
2 Ndingaqala njani kakuhle kwiPinterest?
2.1 Khetha izihloko kwifidi
2.2 Gcwalisa iprofayili kwaye uyilungiselele kwi-SEO
2.3 Ukucingelwa komgangatho kunye nokusebenza